Roblox 2.391.313677 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 2.391.313677 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
Roblox သငျသညျ, play ဖန်တီးဖို့, သင်စိတ်ကူးနိုင်ပါတယ်ဘာမှဖြစ်ပေးနိုင်ပါတယ်သောအဆုံးစွန်ကို virtual စကွဝဠာဖြစ်ပါတယ်။ ကစားသမားသန်းပေါင်းများစွာကို Join ပြီးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအသိုင်းအဝိုင်းအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးဂိမ်းတစ်ခုကွဲပြားခြားနားစုဆောင်းခြင်းကိုတွေ့ကြုံခံစား!
အကောင့်ရှိပြီးသားလား? သင့်ရဲ့လက်ရှိ Roblox အကောင့်နဲ့ Log နှင့်အခမဲ့ play!
သငျသညျ play ဖို့ခံစားချက်အတွက်ဘာတွေလဲ? တစ်ခုကမော်ကွန်းအခန်းကဏ္ဍ-ကစားစွန့်စားမှု? တစ်ဦးကယှဉ်ပြိုင်အရေးယူဂိမ်း? သို့မဟုတ်သင်မယ့်အွန်လိုင်းသင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်အတူကကန်ချင်ပါသလဲ? ရပ်ရွာအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးဂိမ်းတစ်ခုကြီးထွားလာစာကြည့်တိုက်ကိုသင်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းဆော့ကစားရန်အဘို့အအသစ်နှင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်တစ်ခုခုအမြဲရှိပါတယ်ကိုဆိုလိုသည်။
အချိန်မရွေး, နေရာမရွေးအတူ PLAY
သွားလာရင်းပေါ်မှပျော်စရာယူပါ။ ၎င်းတို့၏ကွန်ပျူတာများ, စမတ်ဖုန်း, တက်ဘလက်, Xbox One မှာစက်များသို့မဟုတ် VR ဟက်ဆက်များအပေါ်အခြားလူသန်းပေါင်းများစွာနှင့်အတူ Play ။
ဖန်တီးမှု Be နှင့်သင့်တမူထူးခြားတဲ့စတိုင်ကိုချွတ်ပြပါ! ဦးထုပ်, ရှပ်အင်္ကျီ, မျက်နှာများ, ဂီယာ, နှင့်ပိုပြီးတန်ချိန်နှင့်သင်၏ကိုယ်ပွားစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ပါ။ ပစ္စည်းများမပြတ်တိုးချဲ့ catalog ဖြင့်သင်သည်ဖန်တီးဖို့နိုင်ပါသည်ရူပဖို့ကနျ့ရှိပါတယ်။
In-ဂိမ်းချက်တင် features တွေ, ပုဂ္ဂလိကမက်ဆေ့ခ်ျများ, နှင့်အုပ်စုများကိုသုံးပြီးကမ္ဘာတဝှမ်းသူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူထွက်ဆွဲထား!
Roblox ကစားရန်အခမဲ့ဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့ကစားသမားလည်းသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပွားဘို့အတွက်ဂိမ်းအဆင့်မြှင့်သို့မဟုတ်အေးမြဆက်စပ်ပစ္စည်းဆည်းပူးဖို့ Robux (ကျွန်ုပ်တို့၏ကို virtual ငွေကြေးကို) ဝယ်ယူလို့ရပါတယ်။
Roblox အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Roblox အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
apk-4-free စတိုး 333.5k 93.97M
APK ဗားရွင္း 2.391.313677
File Size: 95.59MB
Release date: 2019-07-08 20:39:21